पासवर्ड बिना मेरो फेसबुक कसरी प्रविष्ट गर्ने मोबाइल फोरम
पासवर्ड बिना मेरो फेसबुक कसरी प्रविष्ट गर्ने
डेनियल टेरासा | | फेसबुक, सामाजिक सञ्जालहरू
पक्कै धेरै पटक तपाईं आफैलाई को प्रश्न सोधेको छ Password म कसरी पासवर्ड बिना मेरो फेसबुक प्रवेश गर्न सक्दछु? »। र यो कहिलेकाँहि कष्टकर वा अव्यावहारिक हुन्छ जब यस लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रविष्ट गर्नुपर्दछ। केवल नयाँ उपकरणबाट मात्र होइन, तर हाम्रो सामान्य उपकरणबाट जहाँ सुरक्षा वा अन्तरिक्ष आवश्यकताहरूका लागि हामी नियमित रूपमा ईतिहास मेटाउँछौं, प्रमाणहरू, कुकीहरू, आदि पहुँच गर्दछ।
खैर, यस पोष्टमा हामी वर्णन गर्दछौं कसरी स्पानिश मा यस सामाजिक नेटवर्क मा लगईन गर्ने र कसरी पासवर्ड प्रविष्ट नगरी फेसबुक लाई पहुँच गर्न।
यो भन्नु पर्छ कि, एक «ट्रिक than भन्दा बढी, यो बारे मा हो एक स्रोत हाम्रो आफ्नै भन्दा बढी फेसबुक। यसको लागि धन्यबाद, यसका प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच प्रक्रिया उनीहरूको खाता र ईन्टरनेट ब्राउजरहरूको पासवर्ड बचत गर्न सामान्य विकल्पहरू प्रयोग नगरीकन पर्याप्त स्ट्रीम गरिएको छ। त्यसोभए म कसरी पासवर्डको बिना मेरो फेसबुकमा जान्छु? हामी यसलाई दुबै कम्प्युटरबाट र मोबाइल वा ट्याब्लेटबाट कसरी गर्ने भन्ने बारे व्याख्या गर्दछौं।
1 पासवर्ड बिना मेरो फेसबुक प्रविष्ट गर्नुहोस्
2 स्वत: पूर्ण डाटाको साथ फेसबुक प्रविष्ट गर्नुहोस्
3 मेरो फेसबुक पासवर्ड पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
3.1 रिपोर्ट लगईन त्रुटि
3.2 फेसबुकमा पहिचान पुष्टि गर्नुहोस्
3.3 असक्षम गरिएको खाताको प्रमाणिकरण
4 आधारभूत सुरक्षा सल्लाह
पासवर्ड बिना मेरो फेसबुक प्रविष्ट गर्नुहोस्
धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू सम्भाव्यताबाट अनजान छन् स्वचालित लगइन विकल्प कन्फिगर गर्नुहोस् कन्फिगरेसन सेटिंग्स को माध्यम बाट। यो गरेर, यो स्थायी रूपमा हाम्रो प्रोफाइलसँग सम्बन्धित हुनेछ। यी अनुसरण गर्नका लागि यी चरणहरू छन्:
पहिले हामी इन्भर्टेड एरोमा क्लिक गर्नेछौं जुन मुख्य फेसबुक स्क्रिनको माथि देखा पर्दछ। यो बाटो मा विकल्प मेनू.
अर्को तपाईले पहुँच गर्नु पर्छ "कन्फिगरेसन र सुरक्षा" र त्यसपछि "सेटिंग".
स्क्रिनको बाँया पट्टि देखा पर्ने मेनुमा, हामी गर्छौं "सुरक्षा र लगईन".
त्यसो भए, नयाँ मेनूमा जुन खुल्नेछ, तपाईंले विकल्पको छनौट गर्नुपर्नेछ "लग - इन" र उनको भित्र, भित्र Your तपाइँको लगइन जानकारी बचत गर्नुहोस् », थिच्नुस "सम्पादन गर्नुहोस्".
समाप्त गर्न, हामी विकल्पमा क्लिक गर्दछौं "तपाइँको लगइन जानकारी बचत गर्नुहोस्।" यस तरिकाले, प्रत्येक चोटि यो ब्राउजर प्रयोग भइरहेको बेला फेसबुकमा जडान गर्न पासवर्ड प्रविष्ट गर्न आवश्यक पर्दैन।
Y यदि कुनै पनि समयमा हामी यो विकल्प निष्क्रिय गर्न चाहन्छौंतपाईंले सुरुबाट यस्तै चरणहरू पालना गर्नुपर्नेछ र, जब तपाईं यहाँ पुग्नुहुन्छ, "निष्क्रिय गर्नुहोस्" विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
महत्त्वपूर्ण: यो स्रोत केवल व्यक्तिगत कम्प्युटि devices उपकरणहरूमा प्रयोगको लागि मान्य छ, तर कुनै पनि हिसाबले यसलाई सार्वजनिक कम्प्युटरमा सिफारिश गर्न वा अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझा गर्न सकिदैन, जस्तै काम कम्प्युटर जसमा धेरै व्यक्तिको पहुँच छ। यदि हामीले यो यो गरेमा, हामी ढोका खुला छोडेर जान्छौं ताकि कुनै पनि अपरिचित व्यक्ति हाम्रो फेसबुक खातामा प्रवेश गर्न सक्दछ।
स्वत: पूर्ण डाटाको साथ फेसबुक प्रविष्ट गर्नुहोस्
पूर्वनिर्धारित द्वारा, मा गुगल क्रोम को कार्य सक्रिय छ "पासवर्डहरू बचत गर्नुहोस्"। जे होस्, यो स्वेच्छाले वा दुर्घटनाबाट हामीले यो विकल्प अक्षम पारेर वा उपकरणको मेमोरी मेटाउन सक्दछ। यो पनि हुन सक्छ कि हामी यस उपकरणमा पासवर्ड बचत गर्न चाहान्छौं भन्ने प्रश्नको उत्तर "होईन"।
त्यसोभए हामी यो फेला पार्दछौं कि यस सामाजिक नेटवर्कमा लग ईन गर्दा पासवर्ड अब देखिँदैन। फेरी परिचित प्रश्न उठ्छ: कसरी पासवर्ड बिना मेरो फेसबुक प्रवेश गर्ने?
समाधान मार्फत छ स्वत: पूर्ण डाटा को लागी सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्। यसैले, तपाईंको फेसबुक पासवर्ड ब्राउजरमा बचत हुनेछ। यो प्राप्त गर्न, तपाईंले निम्न गर्नुपर्दछ:
गुगल क्रोम ड्रप-डाउन मेनू खोल्नुहोस् र "सेटिंग्स" विकल्प चयन गर्नुहोस्।
को मेनू मा"सेटिंग" को विकल्प "स्वत: पूर्ण".
त्यहाँ तपाईंले क्लिक गर्नुपर्नेछ "पासवर्डहरू", यो सुनिश्चित गर्दै कि "सोध्नुहोस् कि यदि म पासवर्डहरू बचत गर्न चाहन्छु" प्रकार्य सक्रिय छ।
अर्को हामी विकल्पमा नपुग्दासम्म हामी तल सार्दछौं "पासवर्डहरू जुन कहिले पनि बचत हुँदैन।" यदि फेसबुक सँग सम्बन्धित एउटा तिनीहरूको बीचमा चिह्नित गरिएको छ भने, यसलाई निष्क्रिय गर्न "X" थिच्नुहोस्।
पछि, हामीले गुगल क्रोम कन्फिगुरेसनमा छोड्यौं फेसबुकमा जानुहोस् र लग इन गर्नुहोस्.
यो त यो हो कि प्रख्यात प्रश्न हो "के तपाइँ पासवर्ड बचत गर्न चाहानुहुन्छ?"। यहाँ हामीले «Save press थिच्नु पर्छ।
यी चरणहरू कार्यान्वयन पछि, फेसबुक पासवर्ड गुगल साथै ब्राउजरमा बचत हुनेछ। यसको ठूलो फायदा यो हो कि हामी पासवर्ड प्रविष्ट नगरीकन अर्को उपकरणबाट फेसबुकमा लगईन गर्न सक्दछौं। सँधै, अवश्य पनि, त्यो उपकरण हाम्रो खातासँग सिnch्क्रोनाइज हुन्छ।
मेरो फेसबुक पासवर्ड पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
हामीसँग भएको सवालमा प्रश्न अझ जटिल हुन सक्छ हराएको फेसबुक पासवर्ड। त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसलाई यो भएको छ, केहिले यो सामाजिक नेटवर्क प्रवेश नगरी लामो समय लिएकोमा वा पासवर्ड राम्रोसँग बचत गरेको वा कण्ठ नगरेकोमा।
तर यस समस्याको लागि समाधानहरू पनि छन्। यदि म पासवर्ड बिना मेरो फेसबुकमा जान सक्दिन भने मैले त्यो पासवर्ड कुनै तरिकाले पुन: प्राप्ति गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ। फेसबुक केहि प्रदान गर्दछ उपयोगी उपकरणहरू यो कष्टकर परिस्थिति समाधान गर्न। हामी तिनीहरूलाई तल विश्लेषण गर्नेछौं:
रिपोर्ट लगईन त्रुटि
फेसबुक लगईन रिपोर्ट गर्नुहोस्
"लगइन त्रुटि"। यदि हामी स्क्रिनमा फेसबुकमा लग ईन गर्ने प्रयास गर्दा यो सन्देश भेट्दछौं भने, हामी गर्न सक्ने एउटा कुरा भनेको सहयोग खोज्नु हो यो लिङ्क। त्यहाँ हामी सामाजिक नेटवर्क को घटना को बारे मा सूचित गर्न को अवसर हुनेछ।
मद्दत प्राप्त गर्न, तपाईंले भर्नु पर्छ फारम त्यो देखिन्छ, हामीले विशेष समस्याको वर्णन गर्न जरुरी रहेको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर। रिकभरी गर्नका लागि खातामा लिंक र ईमेललाई समावेश गर्न हामीले बिर्सनु हुँदैन त्यसैले फेसबुकले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्दछ। यो एक स्क्रीनशट संलग्न गर्न पनि धेरै उपयोगी छ।
फेसबुक जहिले जवाफ दिन्छ, तर द्रुत समाधानको लागि प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। समस्याको प्रकार र यसलाई सुल्झाउनेमा कठिनाईको डिग्रीमा निर्भर गर्दै, प्रतिक्रिया days० दिन वा अधिक लिन सक्दछ।
फेसबुकमा पहिचान पुष्टि गर्नुहोस्
तपाइँको फेसबुक पासवर्ड पुन: प्राप्ति गर्न को लागी अर्को तरिका हो प्रयोगकर्ताको रूपमा हाम्रो पहिचान पुष्टि गर्नुहोस्। फेरि हामी एक पहुँच गर्न को लागी हुनेछ लिङ्क जसले हामीलाई यस उद्देश्यका लागि प्लेटफर्मको भित्र विशेष रूपमा सिर्जना गरिएको पृष्ठमा लैजान्छ।
यहाँ पनि तपाईले एउटा पूरा गर्नुपर्नेछ फारम र एट्याच गर्नुहोस् पहिचान कागजात जन्म मिति देखाउँदैको फोटोको साथ। त्यहाँ धेरै कागजातहरू छन् जुन फेसबुकले यस प्रक्रियाको लागि मान्य मान्दछ: आईडी, राहदानी, ड्राइभर इजाजतपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, कर पहिचान नम्बर, आदि।
एकचोटि फेसबुकले हाम्रो पहिचान पुष्टि गर्‍यो (प्रक्रियाले केहि दिन लिन सक्दछ), हामी हाम्रो खातामा पहुँच पुन: प्राप्त गर्नेछौं। यसलाई प्राप्त गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यो अनुरोध गर्दा हामी फेसबुकलाई ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बरमा सूचित गर्दछौं।
असक्षम गरिएको खाताको प्रमाणिकरण
फेसबुकमा अनब्लक गरिएको खाताको प्रमाणिकरण
कहिलेकाँही फेसबुक खाता पहुँच गर्न सकिदैन किनकि यो असक्षम पारिएको छ। यो परिस्थिति विभिन्न कारणले हुन सक्छ। जब यो पत्ता लाग्छ व्यवहार जुन सेवा सर्त र समुदाय मापदण्डको अनुरूप छैन (हिंसा र धम्की, स्वयं विनाशकारी व्यवहार, उत्पीडन, घृणा भाषण, नग्नता, स्प्याम, ग्राफिक सामग्री, आदि), फेसबुक प्रणाली अगाडि बढ्छ अस्थायी रूपमा असक्षम गर्नुहोस् वा खाता ब्लक गर्नुहोस्। धेरै चोटि फेसबुकले "ex officio" कार्य गर्दैन, तर अर्को प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा जसले खाता रिपोर्ट गरेको छ। तपाईलाई पहिले नै थाहा छ: सामाजिक नेटवर्कमा सबैले सबैलाई हेर्दछन्।
जे भए पनि, फिर्ताको लागि अनुरोध गर्न यो प्रयोगकर्तामा निर्भर हुन्छ। र साथै यस नाजुक मुद्दाको लागि फेसबुक प्लेटफर्मले हामीलाई एक प्रदान गर्दछ लिङ्क कहाँ आवेदन गर्ने, फारम भर्ने र परिचय प्रमाणित गर्ने।
आधारभूत सुरक्षा सल्लाह
हामीले हेरेका थियौं कि त्यहाँ फेसबुक बिना पासवर्ड प्रविष्ट गर्नका लागि थुप्रै पासवर्डहरू छन् वा पासवर्ड रिकभर गर्न वा हाम्रो खातामा पहुँच गर्न। यद्यपि पुरानो भनाइको रूपमा, यो सदैव माफ गर्नु भन्दा सुरक्षित हुनु राम्रो हुन्छ। यसैले यो सधैं ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ आधारभूत सुरक्षा सल्लाहहरू:
गुगल खातासँग फेसबुक खाता लिंक गर्नुहोस्।
खाता जानकारीमा फोन नम्बर दर्ता गर्नुहोस्।
एक रिकभरी ईमेल र, सम्भव भएमा, दोस्रो फोन नम्बर।
सबै भन्दा माथि, खाताहरू नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस् ह्याकरहरूको लागि चीजहरू सजिलो बनाउनबाट बच्न।
अर्को विशेष गरी चाखलाग्दो सुरक्षा उपाय तपाईंको प्रयोगकर्ता खातामा फेसबुकले कल भनेको छ "विश्वसनीय मित्रहरू"। यो गर्नका लागि "सुरक्षा र लगईन" मेनूमा जानुहोस् र "विश्वसनीय मित्रहरू" विकल्प चयन गर्नुहोस्। त्यहाँ हामी एक वा बढी प्रयोगकर्ता खाताहरू थप्न सक्दछौं जुनसँग हामीसँग विश्वासको विशेष डिग्री छ (साथीहरू, परिवार ...)। त्यो हो, जो केवल "फेसबुक साथीहरू" भन्दा बढी छन्। पासवर्ड बिर्सनु को मामला मा, हामी यो जान सक्दछौं रिकभर गर्नका लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » सामाजिक सञ्जालहरू » पासवर्ड बिना मेरो फेसबुक कसरी प्रविष्ट गर्ने
म गुगललाई फेसबुक चाहन्छु
इलिजाबेथलाई जवाफ दिनुहोस्
हटाइएको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
के भाईरस IDP.generic हो र यसलाई कसरी हटाउने